Diaspora avy ao Bosnia & Herzegovina : Manjavozavo ny fijery ny tokantrano sy ny tanindrazana · Global Voices teny Malagasy
Ny kolikoly no heverin'ireo Bosniaka mpilaravin'ahitra ho sakana amin'ny fiverenan-dry zareo
Voadika ny 24 Mey 2022 13:36 GMT
Vakio amin'ny teny srpski, Italiano, Español, English
Sary an'i Sébastien Goldberg, famoahana nampiasàna ny lisansa Unsplash .
Ity lahatsoratr'i Léa Périllat ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny Balkan Diskurs, tetikasa iray an'ny Post-Conflict Research Center (PCRC). Dika nokiraina no averin'ny Global Voices avoaka etoana noho ny fifanarahana iray hifampizara votoaty.
Tokony nifantohan'ireo manampahefana ao Bosnia &Herzegovina (BiH) ireo tanora sy ireo fianakaviana nandao ny firenena. Afaka ny ho iray amin'ireo loharanon'ny fandrosoana ara-toekarena ho an'ny firenena ihany koa ireo diaspora miely patrana be. Ny fandehanana any ivelany, hoy ny ambaran'ireo diaspora, dia tsy mamafa ny fahatsiarovana na ny fifamatorana amin'ny tanindrazana, fa mamorona fomba fijery iray miova momba ny atao hoe tanindrazana.
Iray amin'ireo fahatsapana lehibe ifampizaràn'ny ankamaroan'ny Bôsniaka tsirairay miaina any ivelany rehefa mitsidika ny tanindrazany ny fihetsehampo mifandrirotra. Matetika dia miabo no fahatsapana voalohany: ny sasany mahatsiaro ho tafody an-trano; ny ankamaroany tototry ny hafaliana tafaray indray amin'ireo havan-tiana no sady faly mahita tontolo iray tsy vaovao aminy, izay efa nahazatra azy ny nipetraka tany. Etsy ankilany, amin'ny ankapobeny ireo mpikambana anatin'ny diaspora bosniaka no tonga mitsidika rehefa fotoana fialantsasatr'izy ireny, fotoana mamy “tsy misy ahiahy”. Fotoana fohy aorian'izay, miverina indray ny tena zavamisy iainana ary “manimba ilay sary” sy ireo fahatsapàna lafatra nananan-dry zareo.”
Nanao fanadihadiana ny Balkan Diskurs ary nahazo valiny avy tamin'ireo 88 mpikambana anatin'ny diaspora, ny antsasa-manila amin'ireo dia mipetraka ao Frantsa, Grande-Bretagne, Alemaina, Pays_Bas na Nôrvezy. Milaza izy ireo fa diso fanantenana noho ny tsy fisian'ny fihatsaràna na fanovàna tao Bosnia & Herzegovina tanindrazany.
Miray feo ny ankamaroan'ireo mpikambana anatin'ny disapora ka milaza fa ireo olana tamin'ny taona lasa ihany koa no mbola olan'ity taona ity, ary mbola ho toy izay ihany rehefa miverina any BiH ry zareo. Ho an'ny maro, ny fahatsapàna tena mibahan-toerana dia ny hoe mitoboka (tsy mandroso tsy mihemotra) anaty fotoana iray ilay firenena ary hoe, na nampiato ny ady aza ireo fifanarahana tao Dayton, tsy nisy na inona na inona niova hatreto.
Ireo pôlitisiàna no tena tompon'ny tsiny amin'ny toedraharaha tsy misy fiovàna, manakana ny firosoan'ny firenena tsy ho any amin'ny làlan'ny fahamarinan-toerana demaokratika, toekarena ary sôsialy.
Vehivavy bôsniaka iray, 49 taona, mipetraka ao Pays-Bas no namaritra ny toedraharaha ao BiH tamin'ireto teny manaraka ireto:
“Efa an-taona marobe no teo ny fahadisoam-panantenana sy ny hakiviana tsy hanana hoavy mamiratra… Miaraka amina fitarihana mirona mankamin'ny nasiônalista tahaka izao, tsy hahita fandrosoana isika! Ny fahatsapàna hoe na afaka 30 taona aza, tsy misy zavatra mihatsara, mainka moa fa miharatsy hatrany ny toedraharaha pôlitika …. Miteraka hatezerana, fahasorenana ary alahelo aty anatiko izany.”
Mahatsapa tahaka izany koa ny vehivavy bôsniaka iray avy any Soeda, ary miaiky amin'alahelo fa “tsy misy zava-baovao hatramin'ny andian-taona 1990s, fotokevitra mitovy, pôlitika mitovy.”
Ireo fepetra hiverenana an-tanindrazana
Nandritra ny Ady Bôsniaka izay nirehidrehitra nanomboka 1992 hatramin'ny 1995, olona 2,2 tapitrisa no nandositra an'i Bosnia & Herzegovina. Ankehitriny, 30 taona taorian'ny nanombohan'ny ady tao BiH, mihoatra ny 55 isanjaton'ireo vahoaka bôsniaka no tsy mipetraka ao an-tanindrazany. Nanorina fiainana vaovao any amina firenena hafa ry zareo, indrindra fa ao Eorôpa sy Etazonia. Ny anton'io fipêtrahana any amina firenena hafa io, na dia taorian'ny nitsaharan'ilay ady aza, amin'ny ankamaroany, dia ny fepetra ara-toekarena tsaratsara kokoa iainany. Fanampin'izany, satria ny sasany efa nahatsangana fianakaviana niaraka tamin'ireo olona teratany any amin'ireny firenena ireny, azo antoka no sady mahomby kokoa ny rafi-panabeazana ho an'ny zanak'izy ireo. Miankina amin'ny fandrosoana ara-toekarena sy sôsialy, nefa koa ny fivoaran'ny pôlitikam-panjakana, no hiverenany any BiH.
Maro tamin'ireo nametrahana ny fanontaniana no niaiky fa tsy maniry ny hiverina hody noho ny toedraharaha ara-toekarena ao BiH, izay lazain-dry zareo fa “mampangorintsina sy tsy marin-toerana.” Melohin-dry zareo ny kolikoly, izay inoan-dry zareo fa hita eny rehetra eny sy mampihisatra ny fandrosoan'ny firenena hizotra ho amin'ny làla-mahitsy.
Eken'ireo diaspora fa tsy mora amin-dry zareo ny mamaritra ny hoe taiza no nisy tranon-dry zareo, satria ny fotoana nisy fiantraikany tamin'ny fomba fijerin-dry zareo ny atao hoe trano. Tsy voatery ho ilay fonenana taloha intsony ilay hoe trano amin'izao, na izay hoeritreretina ho endriny amin'ny hoavy. Amin'io fijery io, mahatsiaro izy ireo ho voarirotra eo anelanelan'ny hoe “tanindrazana very” sy ny “tany nampiantrano” azy, izay tsy ahafahan-dry zareo hifàka tanteraka sy feno velively.
Sarotra manokana ny hiatrika io fahatsapana manjavozavo ny hoe “isan'ireo diaspora bôsniaka” io. Miaiky ireo nanontaniana fa tsapan-dry zareo ho toy ny ‘Yugonostalgics’ ry zareo, midika hoe manimanina ny toedraharaha ara-pôlitika, ara-kolontsaina sy ara-toekarena tany aloha ry zareo. Amin'io lafiny io, nohazavain-dry zareo fa tiany ny hahita ny fiarahamonina ao BiH hiroborobo ho lasa toerana iray sy lasitra iray isian'ny fifanakalozana mifototra amin'ny fiaraha-miaina am-pilaminana eo amin'ireo foko, ny fahalianana sy ny fifanajàna, ary ny firaisankina miainga amin'ny fivelaran'ny fiainana sivily iraisan'ny rehetra, tsy ijerena izay foko manokana niaviana.
“Sakantsakana tsy hitsanganana fanjakana iray mirindra”
Ambonin'izany, ny sasany amin'izy ireo miaiky hoe tsy mahatsapa ho tsy manan-drariny ao amin'ny firenena niaviany intsony noho izy zareo nandao azy. Hazavain-dry zareo fa matetika ireo Bôsniaka no tsy faly amin'ny fomba fijerin-dry zareo ny fireneny sy izay heverin-dry zareo momba ny toedraharaha misy ankehitriny ao BiH. Amin'ny lafiny iray, ny zavamisy hoe nandao (an-tsitrapo na an-tery) an'i BiH ry zareo taona vitsy lasa izay dia manome azy ireo fahatsapàna ho tsy manan-jo hiteny na inona na inona intsony momba izay mitrangra, amin'ny maha-vavolombelona tsy mivantana na niharan-javatra. Mahatsapa ry zareo ho toy ny mifanohitra amin'ireo bôsniaka namany nijanona tao BiH sy miatrika ny toedraharaha isanandro.
Atahoran'ireo bôsniaka any am-pielezana ihany koa ny toedraharaha pôlitika amin'izao fotoana izao izay, araka ny fijeriny, lasa sakana lehibe amin'ny fahamarinan-toeran'ny fanjakana. Marobe no manakiana ny fanitsakitsahana zon'olombelona, ny demaokrasia marefo, ary ireo endrika mpanao pôlitika tsy miova ka manapoizina ny rafitra manontolo. Helohin-dry zareo ihany koa no sady atahorany ireo kabary nasiônalista maharitra, izay mampisamantsamaka ny firenena sy manakana ny fanangànana fanjakana iray tsy mivaky sy mirindra.
Ny herisetra ataon'i Rosia amin'ny Okraina amin'izao fotoana izao dia namoha ireo fahatsiarovana mangidy narahana horohoro tsy azo nialàna hoe sao hihitatra hatrany BiH ireo tranga amoizana aina ao Okraina. Raha ny sasany indray matahotra hoe mety hiverina ireo fisehoan-javatra tamin'ny 1992; misy ireo mahita ilay fifandonana vaovao ho zavatra tsy mampino ary mihevitra fa ny olana pôlitika amin'izao fotoana dia mety hitondra any amin'ny fihavaozana pôlitika demaokratika sy am-pilaminana.
Ireo olon'ny diaspora dia mino fa tsy mbola vonona handray fitaovampiadiana ny fiarahamonina ao BiH noho ireo fahatsiarovana maharary navelan'ireo krizy tany aloha. Toy ny nambaran'ny olona iray 63 taona monina ao Frantsa hoe: “Heveriko fa efa ampy antsika izay maty izay, ny fankahalàna ary ny alahelo.”
Ny antsasak'ireo mpikambana ao anatin'ny diaspora, isan'izany ny lehilahy iray 36 taona monina ao Soisa, dia resy lahatra fa, ao BiH, tsy mino ireo kabary nasiônalista sy lian'ady ataon'ireo pôlitisiàna tia tena ny vahoaka, ary, raha fintinina, “tsy adala ny olona ka hifamono ho an'ny tanjona pôlitikan'ny governemanta iray mpanao kolikoly.”